Zvikonzero zvishanu zvekudzidza degree rekupedza | Kuumbwa uye kudzidza
Zvikonzero zvishanu zvekudzidza degree rekupedza kudzidza
Maite Nicuesa | | Postgraduate
Kudzidza ibasa-refu basa sezvo mune dzakawanda zviitiko, mushure pedza mujaho, ino ndiyo nguva yekuongorora mukana wekuenderera neiyi nzira yekudzidza kuburikidza nedhigirii repashure. Ndezvipi zvikonzero zvekusarudza iyi nzira? Vhura Kuumbwa uye kudzidza isu tinofunga nezvenyaya iyi.
1 1. Mbiri inotsvakwa nemakambani
2 2. Mamiriro ekushanda ari nani
3 3. Dzidza uye shanda panguva imwe chete
4 4. Zvipe nguva yekuita sarudzo
5 5. Chikamu chepamusoro chehunyanzvi
1. Mbiri inotsvakwa nemakambani
Mazuva ese, makambani anogamuchira akawanda anotangazve kubva kuvamiriri vanoshuvira kunyorera iwo mabasa avanopa. Pamberi zvakanyanya kukwikwidza kwetarenda, degree rekupedza inzira yekusiyanisa kubva kumakwikwi. Munhu akadzidza degree rekupedza kudzidza anoratidza kufarira kwake kukura zvinehunyanzvi nekupa chakakosha chinhu senguva yekurima zvine hunyanzvi. Mune mamwe mazwi, degree rekupedza kudzidza chinhu chairo; Haisi chete inivhesitimendi yeunotangazve, irizve inovement yehupenyu hwako.
2. Mamiriro ekushanda ari nani
Vadzidzi vakapedza kudzidza vane mikana yakawanda yekuwana mabasa nemamiriro ari nani ekushanda, semuenzaniso, zviri nani mubhadharo nenzvimbo dzebasa rakakura. Naizvozvo, iro rakapedza degree rinokutendera iwe kukura nehunyanzvi.
Kuva nedanho repamusoro redzidzo zvakare kunovhura mikova yekuti iwe utange bhizinesi uye kuumba yako pachako zano nezviwanikwa zvakakosha sezivo.
3. Dzidza uye shanda panguva imwe chete
Kune zvirongwa zvekupedza kudzidza zvine chirongwa chinoda kuzvipira kuzere-nguva, zvisinei, kune zvekare mafambiro ekudzidzisa ayo akarongwa pakupera kwevhiki kana kunyange kure. Naizvozvo, zvinowirirana nezviitwa zve basa. Unogona kuyananisa mabasa ese ari maviri.
4. Zvipe nguva yekuita sarudzo
Iwe unogona zvakare kutora postgraduate kosi yekudzidzira seyako nguva yekufungisisa pane rako ramangwana rehunyanzvi. Nguva yauchazowedzera maonero ako, uve neruzivo rutsva, iwe uchakura uye uchakura kusvika padanho rekuzove yakanakisa vhezheni yako kupfuura pawakapedza zvidzidzo zvako zvekare.
5. Chikamu chepamusoro chehunyanzvi
Kudzidza degree rekudzidza rinokutendera kuti uve nyanzvi pane yakatarwa nhaurwa. Uye kuve nyanzvi chikamu icho chisingawanikwe chete nekudzidzira, asiwo neruzivo. Nekudaro, kurovedza ndiyo hwaro hwakakosha.
Asi, pamusoro pezvo, kana uchidzidza degree rekupedza kudzidza iwe unoratidzawo hunhu hwekuvandudza, iwe unoisa mari mukati kuzvisarudzira Nekuchengeta yako brand brand, iwe unoratidza kuzvininipisa kwako nekushandisa Socrates 'chirevo: "Ini ndinongoziva kuti ini hapana chandinoziva." Ndokunge, iwe unoratidza kuti iwe unoziva kuti iwe uchine zvakawanda zvekudzidza.
Nzvimbo yekirasi inokurudzira mukati mawo, semuenzaniso, iwe unogona kuisa hunyanzvi hwako hwemagariro mukudzidzira kumisikidza vanobatana nebasa iro, pamwe, pane imwe nguva, rinotungamira kumibatanidzwa mitsva. Kuenderera mberi nekudzidza kunobatsira iwe kumisikidza pfungwa dzako, kugona kwako, hunyanzvi hwako uye chiono chako chinoshanda chezvawakadzidza. Zvakare, iwe unogona kudzidza kubva kune akanakisa vadzidzisi.
Izvo hazvireve kuti kudzidza kweanopedza degree ndiyo chete nzira yekuzvitsauranisa iwe, zvisinei, iyo yakakosha nzira. Ndeupi mufungo wako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » University » Postgraduate » Zvikonzero zvishanu zvekudzidza degree rekupedza kudzidza
Zvikonzero zvishanu zvekurwira basa rako rehunyanzvi
Basa rakaoma sekiyi yekubudirira